Zanu PF neMDC-T Dzopesana paMashoko aAmai Mujuru
Kukadzi 11, 2014
WASHINGTON DC — Bato reZanu PF rinoti rinosimbisa danho remutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo, Amai Joice Mujuru, pamwe nasachigaro webato iri, VaSimon Khaya Moyo, panyaya yekurwisana nehuwori munyika.
Mugwaro raburitswa nebato iri, mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, vanoti bato ravo haridi huwori, chikonzero chakaita kuti ive imwe yenyaya dzakave pamwongo wehwaro hwebato iri pakutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo.
VaGumbo vanoti sebato vanokomekedza hofisi yemutungamiri wenyika, sezviri mu ZIMASSET, nedanho rayo rekurwisana nehuwori sezvakaratidzwa pachena mukufumurwa kwemazi mari ari kutambirwa nevamwe vakuru-vakuru mune mamwe makambani ari pasi pehurumende.
Bato reZanu PF rinoti rinotenda zvikuru vezvenhau vakazvimirira pamwe nevari pasi pehurumende nekuburitsa kwavari kuita nyaya dzehuwori kuitira kufumura vari kuita zvehuwori.
Gwaro reZanu PF iri rinobuda mazuva mashoma Amai Mujuru vataurawo pamusoro pehuwori hunonzi huri kuitwa munyika, kunyange hazvo paine kusanzwisiswa kwezvavakanyatsotaura pavakati venhau vasiyane nezvekuburitsa nyaya dzehuwori.
Vachitaura kumusangano wemadzimai ebato ravo kuChinhoyi mukupera kwesvondo, Amai Mujuru vakati vatsigiri veZanu PF vachenjerere dzimwe nhengo dzebato dziri kuda kuparadza hurumende pamwe nebato dzichibva mukati, mushure mekunge dzatadza kuparadza dzichibva kunze.
Mashoko aya anonzi akasimudza kutsamwa kwakanyanya kubva kumapoka evanhu akasiyanasiyana, anosanganisirawo evatori venhau, avo vaiona sekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika uyu ari kuda kuviga huwori.
Asi VaGumbo vanoti havaoni chakaipa pane zvakataurwa naAmai Mujuru izvi, sezvo vaine maonero avowo panyaya iyi.
VaGumbo vanoti bato ravo richagara pasi kuti ribude negwara rekutora mukugadzirisa nyaya yehuwori iyi zvachose.
Panyaya yevanonzi vari kuda kuparadza musangano vachibva mukati, VaGumbo vanoti kana bato rakawana humbowo hwekuti pane vari kuita izvi, richatora matanho akakodzera.
Bato reMDT inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai rakaburitsawo gwaro rekutsoropodza mashoko anonzi akataurwa naAmai Mujuru aya.
Mutauriri webato iri, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 kuti Amai Mujuru vanofanirwa kusiya basa pamusoro yemashoko avo aya.